Bengingasebenzisa inguqulo yamahhala lapho isizinda sami singenziwa ngokwezifiso, kepha II bengifuna abantu bathembe futhi babone i-URL ebengiyisabalalisa… kulokhu go.martech.zone. Ukubeka i-URL ejwayelekile ifulegi elibomvu kubantu abaningi abazi ukuphepha.
Isici esiyinhloko nokulandela umkhankaso weGoogle Analytics. Indlela enhle yokusebenzisa isifinyezi se-URL ukunciphisa ubude be-URL ende lapho ufake nentambo yombuzo wakho we-UTM. NgeShort.io, konke lokhu kuyingxenye yezinketho kwi-URL yakho efushanisiwe ene-interface enhle ehlanzekile.